Igbo, John: Lesson 112 - Okwu Kraist nye nne ya (Jọn 19:25-27) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 112 (Christ's word to his mother; The consummation)
c) Okwu Kraist nye nne ya (Jọn 19:25-27)
24b Ma ndi-agha mere ihe ndia. 25 Ma nne-Ya, na nne nwa-nne-Ya, Meri nwunye Klopas, na Meri Magdalini, nēguzo n'akuku obe-Ya. 26 Ya mere, mgbe Jizọs hụrụ nne ya na onye na-eso ụzọ ya bụ onye ọ hụrụ n'anya ka ọ na-eguzo n'ebe ahụ, ọ sịrị nne ya: "Nwaanyị, lee nwa gị!" 27 O wee sị onye na-eso ụzọ Jizọs: "Lee nne gị!" Malite n'oge awa ahụ, onye ahụ na-eso ụzọ kpọgara ya n'ụlọ ya.
Jọn adịghị edekọ okwu mbụ nke Jizọs site na obe, na-agbaghara ụwa dum. O kwughịkwa na ndị Juu na-akwa ya emo, ma ọ bụ na Jizọs gbaghaara onye ohi ahụ n'aka nri ya. Ihe ndị a ama amalarị na chọọchị mgbe John dere.Mgbe ndị nchụàjà hapụrụ ebe obe n'ocheghị arịrịọ ya na arịrịọ ọ rịọrọ maka mgbaghara Nna ahụ, ìgwè mmadụ ahụ hapụrụ, na-agba ọsọ gaa Jerusalem iji chụọ ụmụ atụrụ Ememme Ngabiga àjà. Oge nkwadebe dị mkpụmkpụ. Ndị ọchịchị okpukpe gakwara eme ememe ahụ maka oriri nnukwu oriri mba ahụ. A na-esi na mgbidi obodo ahụ eme mkpọ, ụmụ atụrụ ndị e gburu n'ụlọ nsọ, ọbara na-asọkwa nke ọma. Ụlọ nsọ ahụ jupụtara n'ekele. N'èzí Jerusalem ka Nwa Atụrụ Chineke nke Chineke dakwasiri n'elu osisi ah nke ana adighi ebibi, rap ghi ya ma leda ya anya. Ndị nche Rom na-ekpere arụsị na-eche ndị mmadụ atọ nọ n'obe
N'oge ahụ, ụfọdụ ndị inyom rutere n'obe ahụ n'ụzọ dị jụụ, ma guzoro jụụ. Ihe ndị gara aga mebiri uche ha. Onye Pụrụ Ime Ihe Nile nọ na-ekpuchi isi ha na oké mgbu. Okwu nkasi obi abughi nke naabia, obi adighi enwe ike ikpe ekpere. Ma eleghị anya, ụfọdụ na-edegharị okwu sitere na Abụ Ọma.
Jizọs nụrụ mkpu ákwá nke nne ya ma ghọta anya mmiri nke Jọn onye ọ hụrụ n'anya. O cheghị echiche banyere ọnọdụ ya, ọ bụ ezie na ọnwụ ya. Na mberede ha nuru olu ya, "Nwa nwanyi, lee Okpara gi."
Ịhụnanya Kraịst zuru oke, na-elekọta ọdịmma nke ndị ọ hụrụ n'anya n'etiti ahụhụ ya iji gbapụta ụwa. Ihe Simeon nke edeworo maka Virgin ahu mezuzuru, na mma agha aghatu nkpuru obi ya (Lk 2:35).
N'ịbụ onye na-enweghị ike iji ego ma ọ bụ ụlọ nye nne ya, o nyere ya ịhụnanya ọ wụsara n'ime ndị na-eso ụzọ ya. Jon soro nne Kraist bia (Matiu 27:56), ma okwugh aha nke aka ya ma obu nke Virgin, ka o we ghara iwepu ya site n'onye kwesiri ntukwasi obi n'ihi Kraist na oge hour nke ebube ya. Mgbe ọ gwara John okwu wee nye nne ya nlekọta ya, mgbe ahụ ka onye ahụ na-eso ụzọ na-abanye n'ime ìhè nke obe. Ọ nakweere Meri ma kpọbata ya n'ụlọ ya.
Ndị inyom ndị ọzọ hụrụ nchegbu a. Onye-nwe-ayi anaputawo otù onye nime ha site na ndi-mọ ọjọ asa. Nke ahụ bụ Meri Magdalin. O nwetara mmeri mmeri Jizọs n'ime mkpụrụ obi ya. Ọ hụrụ Onye Nzọpụta ya n'anya wee soro ya.
d) Ebumnobi (Jọn 19:28-30)
28 Mgbe nke a gasịrị, mgbe Jizọs hụrụ na ihe niile agwụla, ka ihe e dere n'Akwụkwọ Nsọ wee mezuo, ọ sịrị: "Akpịrị na-akpọ m nkụ." 29 Ma, lee! n'ihi ya, ha tinyere sponge jupụtara na mmanya na hyssop, ma jide ya n'ọnụ ya.
Jon, onye na-ezisa ozi ọma nwere onyinye nke ikwu okwu dị ukwuu n'okwu ole na ole. Ọ dịghị agwa anyị ihe ọ bụla banyere ọchịchịrị nke kpuchiri ala, ma ọ bụ anyị anụ mkpu ákwá nke Kraịst na iwe Chineke maka mmehie anyị. Ma a gwara anyị na na njedebe nke mgbagwoju anya nke anụ ahụ ya, awa atọ na-adịgide adịgide, ọ matara na ọ bụ ọnwụ. John ekwenyeghi ka onwadi kaogw Jizos, ma Jizos ji obi ya niile kwere ya. Mkpụrụ obi ya gwụchara n'ịrụcha ọrụ nke mgbapụta zuru ụwa ọnụ. Jizos huru nzoputa zuru oke maka mmadu nile, uzo onwu ya ga-esi naputa otutu nde ndi nmehie site na nmehie ha ma nye ha ikike ibiakwute Chineke. Ọ hụrụ owuwe ihe ubi na mkpụrụ nke ọnwụ ya tupu mgbe ahụ.
N'oge a, a na-asụ ude n'egbugbere ọnụ ya, "akpịrị na-akpọ m nku." Ya, onye kere eluigwe na ala na ije ije na mmiri nke jupụtara na oxygen na hydrogen, na-agụ. Ima ima enen̄ede enen̄ede ama ima Ete emi ekenyenede ima esie ke Eyen esie. Nke a bụ ọnọdụ hell, ebe agụụ na-agụ mmadụ, ahụ na mkpụrụ obi, ma enweghị ike ịchọta ume. N'oge gara aga, Kraist ekwuola nwoke bara ọgaranya na hel na akpịrị ịkpọ nkụ na ọkụ nke rịọrọ Abraham ka o zitere Lazarọs ka o tinye mkpịsị aka ya n'ime mmiri oyi ma mee ka akpịrị akpịrị gbarụọ. Jizos b ezi mmad, ochichi nke akporo gi, mao kwaghi ikwogi ya wee rue mgbe agoro nke nzoputa. Mgbe ahụ, Mmụọ Nsọ kpugheere ya na ekwusawo ozi mgbapụta ya otu puku afọ gara aga na Abụ Ọma 22:13-18, na-aṅụkwa mmanya na-akpọ mmanya na Abụ Ọma 69:21. Anyị amaghị ma ọ bụrụ na ndị agha nyere Jizọs mmanya ahụ dịka mmanya vine ma ọ bụ jikọta ya na mmiri, ma ọ bụ dị ka nlelị ma ọ bụ na-akwa ákwá. Anyị maara na ọ bụghị mmiri dị ọcha. Nwoke ahụ bụ Jisọs, onye bụ Ọkpara Chineke, nọ n'akụkụ a enweghị enyemaka.
30 Ya mere mb͕e Jizos natara ya manya-vine b͕ara uka, ọ si, Ọ gwuwo. O we rube isi, rara mọ-ya nye.
Mgbe Jizos detusiri mmanya nke iwe, o kwuputara okwu mmeri, "Emechara ya!" Otu ụbọchị tupu iti mkpu a nke mmeri, Ọkpara ahụ rịọrọ Nna ya ka o nye ya otuto n'elu obe maka mgbapụta anyị, ka Nna, Ya onwe ya, wee nye otuto. Ọkpara ahu kwenye na okwukwe na ekpere a ka aghoza, na o mezue oru nke Nna nyeworo ya (Jon 17:1,4).
Lee ka Jizọs si dị ọcha n'elu obe! Ọ dịghị okwu ịkpọasị gbapụrụ egbugbere ọnụ ya, ma ọ bụ ịsụ ude maka ọmịiko ma ọ bụ mkpu ákwá, ma ọ gbaghaara ndị iro ya na-anọgide na-ahụ n'anya Chineke, bụ onye yiri onye iro n'ihi anyị. Jizos maara na ogwogwo l nke mgbap ta n'ihi na Chineke mere ka ozizo nke nzoputa anyi site n 'on ah h. O nweghi onye puru imata omimi na ihe di elu nke ihunanya nke Atọ n'Ime Otu, n'ihi na Okpara ji onwe ya nye Chineke site na Mo ebighebi, n'enweghi ure, àjà di ndu (Hibru 9:14).
Site na nkpu oku nke Kraist n'obe, nzoputa zuru ezu, obughi ndi kwesiri ibu ndi zuru oke. Ọ bụghị onyinye anyị, ọrụ ọma anyị, ekpere anyị, ịdị nsọ anyị nke na-eweta ezi omume anyị ma ọ bụ tinye nsọ nsọ na ndụ anyị. Eyen Abasi ama anam kpukpru emi kpukpru ini. Site na ọnwụ ya, afọ ọhụụ amalitelarị na udo na-achị, n'ihi na Nwa Atụrụ Chineke gburu egbu mere ka anyị na Nna anyị nọ n'eluigwe dị n'udo. Onye kwere ekwe bu onye ezi omume. Akwụkwọ akụkọ bụ nkọwa banyere okwu Jizọs, nke ikpeazụ na Chineke, "Ọ gwụla!".
Jizọs kpuru isi ya, n'ikpeazụ, na nsọpụrụ na ịma mma. O tinyere mkpụrụ obi ya n'aka Nna ya nke hụrụ ya n'anya. Ịhụnanya a mere ka ọ banye n'ocheeze amara, ebe ọ na-anọdụ ala taa n'aka nri nke Nna, otu na Ya.
EKPERE: O Nwa-aturu di nsa, onye bula mmehie nke uwa; ị ruru eru ịnata ike, akụnụba, amamihe, ike, nsọpụrụ, otuto, ngọzi na ndụ m. Welite m isi lee gị anya, gị onye a kpọgidere n'oche, na-achọ mgbaghara maka gị maka nmehie m nile, na ịtụkwasị obi, ị ga-edo m nsọ site n'amara na ọbara gị.
Gịnị bụ okwu atọ Jizọs kwuru?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:50 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)